Moorgan: Kornayl C/hi baa Kismaayo iyo kursigii Beeshaydaba iga kala Tuuray
Waxaa la sheegaa in waxyaalihii Moorgan Kismaayo looga qabsaday ay ku jirtay faro-galin uu ku sameeyey C/hi Yuusuf kaddib markuu ciidan uusan Moorgan ka raali ahayn u diray halkaas. Waxaa taas ka darnayd markii Beesha Sade ay xubin baarlamaan u diyaarisay jananka Axmed Warsame isagoo Kimaayo jooga halka kornayl C/hi uu ka reebay jananka Moorgan inuu ku daro xildhibaannadii beeshooda. Markaad fiirisid beelaha kale sida Hawiyaha iyo Digil iyo Miriflaba; iska daa in dagaal-oogayaashii soo geli waayaan xubnaha baarlamaankee bal iyagaaba xulayey. Makuu muuqdaaa sawirka feylo-goynta ah ee C/hi la rabo cid kasta oo ay isku hayb yihiin?
Dad badan oo kaalinta dagaal-ooginimo ee Moorgan liidi jiray oo u haystay inuu ka heer hooseeyo kornayl C/hi ayaa waagu ku beryey markii la arkay Moorgan oo muddo shan sanadood ah dibad-yaal ahaa oo haddana leh saaxiibo shisheeye iyo dagaal-oogayaal kalaba. Dad badan baa islahaa wuxuu jilbaha qabsanaa kornayl C/hi laakiin waxaad hadda mooddaa inuu barabixinayo kornaylka kaddib markii kornaylku u helay beeshiisa xubno aad uga yar tii Cali Khaliif ka helay Carta. Kornayl C/hi oo rabay inuu magac dilo Moorgan ayaa beenoowday markii jananku hal mar mudh soo yiri oo la arkay isagoo isku duwaday ciidamo badan. Boggaggay hagaan reer Puntland iyo dadweynaha reer Puntlandba waxay hadda la dhacsanyihiin Moorgan iyagoo u arka nin xaq-u-dirir ah halka ay C/hi u arkaan masiibo Ilaah usoo diray oon iyaga waxaan ahayn u jeedin. Waxaad mooddaa inuu Moorgan hadda qaadayo heesihii Hadraawi:
· Maxaan wacdarha adduunka
u soojirey waayaheeda
warkeeda la ii dhammeeyey
maxaa waran layla doonay
habeynnimo layla waayey
nasiib kaga waa bariistey
maxaa dabin lay wareejey
wedkeyga la ii shir-qoolay
maxaa dacar lay walaaqay
waabaayo ku caafimaaday
Maxaa wacad layla qaatay
rumaystay Wallaahi beena
maxaan webiyaal is-jiidhay
dhexdooda ka waab samaystay
wanaag anigoo sameeyey
maxay wadhi ii dambeysey.
Moorgan wuxuu leeyahay: C/hi ma waxaad iigu darmatay IGAD oo Kenya igu xirtay, baasaboorkeygii iyo dharkeygii la hartay weliba magac-dil iigu dartay? Ma anoo dooxada Jubba dagaal la maaggan baad keentay inaad kuraastii la boobayey iga qadisid? “Ciiloow wayeey talo xumaan cudur ka weyneyne”. Moorgan oo sii wada heestii Hadraawi:
· Wadeeco maxaan ilaashey
waraabe ka soo xereeyey
sac weyda maxaan u dhaanshey
Walwaal ugu soo arooray
halkiisa ku soo waraabshey
maxaan weli soo kexeeyey
wadaaddo maxaan u yeedhay
u loogey wankayga fiican.
Waxyeello halkay u taallo
naftayda maxaan ka waanshey
walaalkay nimaan u haystey
muxuu waddo ii fadhiistay.
Qofaan wehelkayga moodey
ka qayb galay weerarkayga
ruuxaan la wadaagey oontu
ku wiirsadey dhiilladayda.
Moorgan oo u haystay C/hi inuu ehel iyo degaan la wadaago wuxuu ku celceshaa meerisyadan:
muxuu waddo ii fadhiistay
Moorgan wuxuu leehay: Lugo-dheere, Xuseen Caydiid, Aadan Madoobe iyo rag kale ayaa lGAD eedaynaya iyagoo shir-sharaa’id qabanayana oo leh: Moorgan xaq-darraa lagu heystaa halka aad C/hiyoow idaacado Xamar ku tiri: Moorgan isaga xubnihii kuma darin maxaa yeelay IGAD baa cunaqabatayn kusoo rogtay. Marka C/hi ma ninkii ugu horreeyey ee fuliya cunaqabatayntaydii IGAD baad noqotay? Moorgan waa nin geed geli jiray oo geed-galka C/hi wax ka tarimaayo.
Si kastaba ha ahaatee waxaan jananka Moorgan iyo kornayl Barre Hiiraalaba ugu yeeraynaa inay caqliga ka shaqaysiiyaan oo aysan ku degdegin dhiig-daadin kale. Waxaan filayaa Kismaayo iyo dhiig Soomaaliyeed waa is arkeen oo xiiso kale uma qabto. Arrinta xal nabadeed halagu dayo. Hadda Moorgan waxaa la leeyahay wuxuu joogaa meel Kismaayo 70 Km u jirta; waxaana la sheegayaa in Barre Hiiraale weerar ku yahay. Marka waxaan leennahay arrinta si nabad ah haloo galo. Moorgan halkaagaas hasoo dhaafin, adna Barre Hiiraaloow ha raadsan.
See Moorgan Kenya ugu soo noqon karaa isagoon xubin baarlamaan ahayn? Haddii aniga la ila tashanayo, C/hi baan ka qaadi lahaa xubinnimada oo waxaan siin lahaa Moorgan maxaa yeelay C/hi wuxuu u tartamayaa madaxweynanimo marka ma garanayo wuxuu ku falayo xubin baarlamaan. Hadduu madaxweyne helana waa wuxuu raadinayey hadduu waayana waxaan filayaa inaysan xubintaasi waxba u tarayn. Haddii taas la waayo waxaa laga rabaa qabiilka Hartiga inay Moorgan boos siiyaan si uu u yimaado Kenya oo aan shirka Soomaalidu u eersan.
Inkastoonan rajo fiican ka qabin shirka Soomaalida haddana 22/09/04 wax fog maaha haddii Ilaah na gaarsiiyo. Hadday dowlad dhalato, magaalooyinka ugu horreeya ee u baahan in hub-ka-dhigis iyo waxqabad waa Xamar iyo Kismaayo. Haddii dowlad dhalan weydana waxaan ku xaalaynaa sidii dhaqanka noo ahaan jirtay. Marka caqligu ha shaqeeyo.